I-Xiaomi Mi 8 Lite kunye nezinye izinto ezihambisa ixabiso eliphantsi ngeeNtengiso zeNtlakohlaza zaseAmazon | I-Androidsis
I-Xiaomi Mi 8 Lite kunye nezinye izinto ezihamba ngexabiso eliphantsi ngeeNtengiso zeNtlakohlaza zaseAmazon
UNerea Pereira | | Iiselfowuni
Njengesiqhelo, isigebenga sentengiso esikwi-Intanethi sithathe ithuba lokufika kwentwasahlobo ukuzisa uthotho lwezibonelelo eziya kuthi zisivumele thenga iimfowuni ezingabizi kunye nezinye izaphulelo ezinomdla ngokwenene. Ngaba awufuni kuphambana ukhangela ezona zithembiso zibalaseleyo? Silungiselele ukudityaniswa kunye nezibonelelo ezilungileyo ezikhoyo.
Lumka, siya kuba nakho ukufumana iifowuni zexabiso eliphantsi, kodwa akukho zindawo zokungena kwinqanaba. Sithetha ngeemodeli zobungakanani be Xiaomi yam 8 Lite, okanye iHuawei P20 Lite, izixhobo ezingaphezulu kokuhlangabezana neemfuno zakhe nawuphi na umsebenzisi. Kwaye ngexabiso eliqhekezayo! Ungaphoswa kukudityaniswa kwezona zinto zilungileyo Amashishini entwasahlobo eAmazon.
1 Uluhlu lwee-mobiles ezingabizi kakhulu onokuzithenga ngentengiso yasentwasahlobo yeAmazon
1.1 Thenga iXiaomi Mi 8 Lite ngexabiso eliphantsi kunangaphambili
1.2 Thenga i-BQ Aquaris V Plus ngexabiso elifanelekileyo
1.3 Thenga iHuawei P20 Lite, ibanga eliphakathi ukuze ubalawule bonke
1.4 Thenga i-Motorola G6 Plus ngexabiso eliphantsi kunangaphambili
2 I-Huawei Mate 20 X, yifumane nge-100 euros ngexabiso eliphantsi
Uluhlu lwee-mobiles ezingabizi kakhulu onokuzithenga ngentengiso yasentwasahlobo yeAmazon
Ukwenza kube lula ukufumana iifowuni zentengiso esizifumene kwiAmazon, siyalele iingcebiso zethu ukusuka kwelona xabiso lisezantsi ukuya kwelona xabiso liphezulu. Ngaba unayo uhlahlo-lwabiwo mali olukhulu kodwa ufuna ukugcina xa uthenga iflegi? Yihla uye esiphelweni. Ngaba ukhululekile ukukrwela ipokotho yakho? Izisombululo zokuqala oza kuzibona ziya kuba zanele, zikuvumela ukuba udlale nasiphi na isihloko, uvule usetyenziso, ungene kwi-Intanethi kwaye usebenzise iinethiwekhi zentlalo ngaphandle kwengxaki.
Thenga iXiaomi Mi 8 Lite ngexabiso eliphantsi kunangaphambili
Olu qulunqo siluqala ngolona lubalaseleyo iifowuni ezingabizi onokuyithenga uyithengise kwiAmazon, uthetha ngesixhobo esipheleleyo. Kwaye iXiaomi Mi 8 Lite iya kuzanelisa iimfuno zakho, uyilo olunomtsalane, ngomzimba owenziwe ngeglasi enobushushu kunye nealuminium ukunika isixhobo ukubonakala kwepremiyamu yokwenyani, kunye nezixhobo eziphezulu.
Uhlaziyo lweXiaomi Mi Max 3 kunye neMi 8 Lite kwiPie ye-Android
Sithetha ngeprosesa ye-Snapdragon 660 kunye ne-4 GB ye-RAM, i-64 GB yokugcinwa kwangaphakathi, isikrini se-6.26-intshi kunye ne-HD epheleleyo + isisombululo, inkqubo yekhamera emibini. Egqibelele? Oko ngoku Ixabisa ngaphantsi kwe-euro ezingama-180.
Thenga ifowuni yeXiaomi Mi 8 Lite emnyama
Thenga i-BQ Aquaris V Plus ngexabiso elifanelekileyo
Ukuba ujonga ii-smartphones ngexabiso elifanelekileyo, awunakuphulukana nale ngxoxo eza kukuvumela ukuba uyibambe. I-BQ Aquaris V Plus ngexabiso elinomdla kakhulu enkosi kwisaphulelo esingaphezulu kwama-euro angama-60 afumaneka kwiAmazon. Iscreen se-5.5-intshi, i-3 GB ye-RAM, i-32 GB yokugcina kunye neRadio FM yenza esi sisombululo sibe yimodeli efanelekileyo.
Thenga i-BQ Aquaris V Plus
Thenga iHuawei P20 Lite, ibanga eliphakathi ukuze ubalawule bonke
Nangona, ukuba ujonga eyona thengiselwano yokwenyani, awungekhe uliphose eli thuba: the Huawei P20 Lite ngesaphulelo esimalunga ne-100 ye-euro ukuze ube nakho ukuthenga enye yezona ndawo ziphakathi eziphakathi kuluhlu lwexabiso ngehlazo: i-203 euro. Sithetha ngesixhobo esinoyilo olubonakalayo, iprosesa yaseKirin 659 kunye ne-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yememori yangaphakathi. Ngezi zibonelelo, kunye nexabiso lokudiliza, sijongane nenye ye Iifowuni eziphathwayo ezingabizi kakhulu Sinokuyithenga ukuba ngaphezulu kwayo iza nesigqubuthelo sesipho!
Thenga iHuawei P20 Lite
Thenga i-Motorola G6 Plus ngexabiso eliphantsi kunangaphambili
Olunye ukhetho olukhulu lokuthatha ingqalelo, ukuba uyayithanda itheminali yohlobo lweMelika kukuthenga iMoto G6 Plus kuba ngoku inesaphulelo sama-euro angama-80 kwiAmazon. Ewe, iimpawu zabo azinanto ibenza babalasele xa kuthelekiswa neentshaba zabo kolu luhlu lwee-mobiles ezingabizi kakhulu, kodwa baya kuba ngaphezulu kokuhlangabezana nokulindelweyo kwawo nawuphi na umsebenzisi kwaye, kungcono, ayinangqimba inzima yesiko, Ke sisixhobo esifanelekileyo ukonwabela amava amsulwa nelula e-Stock ye-Android.
Thenga i Motorola Moto G6 Plus
I-Huawei Mate 20 X, yifumane nge-100 euros ngexabiso eliphantsi
Okokugqibela, sikulethele izithembiso kubathandi beHuawei ongenakuphulukana nayo. Sithetha malunga nokubakho kwe thenga iHuawei Mate 20 X, Enye yeefowuni ezilungileyo kwintengiso, ngesaphulelo se-100 euro. Sithetha ngesixhobo esine-Kirin 980 processor, i-6 GB ye-RAM, i-128 GB yogcino lwangaphakathi, i-7.2-intshi yeHD epheleleyo + isikrini ... Yintoni enye onokuyicela?
Thenga iHuawei Mate 20 X
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Xiaomi Mi 8 Lite kunye nezinye izinto ezihamba ngexabiso eliphantsi ngeeNtengiso zeNtlakohlaza zaseAmazon
Uyilo lwe-Oppo Reno lutyhileke ngobunewunewu obumangalisayo kwikhamera yayo
I-Samsung Galaxy Fold iboniswe kwividiyo ukungqina ukuzinza kwayo